Unity 5.0 ကို Ubuntu 12.04 အတွက်ရနိုင်သည် Linux မှ
ဗားရှင်းအသစ် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် Ubuntu ကို 12.04 Pangolin ကိုသတ်မှတ်ပါ။ သို့သော်တရားဝင် repositories တွင်မဟုတ်ဘဲ Unity project ၏ PPA တွင်ပါ။
အများကြီးဖြစ်ခြင်းအပြင် ပိုမိုပေါ့ပါးသည်, Unity အသစ်တွင်အချို့ပါဝင်သည် အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များ y အင်္ဂါရပ်တွေ.
Ubuntu 12.04 ကိုထုတ်လွှင့်သောအချိန်တွင် Unity ကို configure လုပ်ရန် Ubuntu အတွင်းရှိ Unity5ကိုပေါင်းစပ်ထားသော tool တစ်ခုနှင့်အတူဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ ဤကိရိယာသည် Compiz ၏သက်ရောက်မှု configurator နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Unity bar ၏အရွယ်အစားကိုတိုးချဲ့ရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်၊ Unity bar ၏နောက်ခံအရောင်ကိုပြောင်းလဲရန်၊ Unity ဘား၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားပြုပြင်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများစွာ၏အလိုရှိသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုမှာ desktop ၏အပေါ်ဆုံးဘားရှိ global menu တွင်ဖြစ်သည်။ ယခုတိုင်အောင်ကမ္ဘာအပလီကေးရှင်းအသုံးချပရိုဂရမ်သည်မောက်စ်ကိုမောက်စ်ပေါ်၌သာပြသနေစဉ်ယခုဤမီနူးသည်ကျွန်ုပ်တို့ချိန်ညှိနိုင်သည် - လျှောက်လွှာအသစ်တစ်ခုကိုစတင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဖော်ပြသည်။
အခြားတိုးတက်မှုများမှာ Dash ၏နောက်ခံအရောင်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ထို့အပြင် Launcher ထဲသို့ "desktop ကိုပြရန်" ကိုလည်း icon တစ်ခုထည့်နိုင်သည်။ Unity 2D ကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်သည်။ Dash တွင် developer များက maximize နှင့် close button များကိုထည့်သွင်းထားသည်။
En ဘုရားရေ! Ubuntu ကို! သူတို့ကဒီသတင်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်ထပ်သိချင်စိတ်များလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
Ubuntu 12.04 ကို Installation
Ubuntu 12.04 ကိုအသုံးပြုလျှင် Unity အသစ်ကိုစမ်းသုံးကြည့်ပြီးပါပြီ။
sudo add-apt-repository ppa: unity-team / ppa
sudo apt-get အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
အရင်းအမြစ်: ဘုရားရေ! Ubuntu & WebUpd8
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Ubuntu 5.0 အတွက် Unity 12.04 ရရှိနိုင်သည်
Ubuntu 5.0 တွင် Unity 11.10 ထည့်သွင်းပုံ http://www.omgubuntu.co.uk/2012/01/how-to-install-unity-5-0-in-ubuntu-11-10/၎င်းသည်နောက်ဆုံးဗားရှင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါအမှားများရှိကြသည် (Linux Mint နှင့် Ubuntu) နှစ် ဦး စလုံးသုံးသောအမှားများရှိသည်။ သို့သော် mint သည် Ubuntu နှင့် Debian တို့ပေါ်တွင်အခြေခံသည်ကိုသင်သတိရသင့်သည်။ Linux အားလုံးသည် ၀ င်းဒိုးများထက်သာလွန်သည်။ တစ်ယောက်တည်းစောင့်ဆိုင်းရုံတင်မကဘူးအချိန်နည်းနည်းသာပေးရမယ်အမှန်တရားကတော့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မိုက်ခရိုဆော့ shit ကိုသုံးတာထက်ပိုကောင်းတယ်
Viincent Garrciia သို့ပြန်သွားပါ
စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုကောင်းစွာလေ့လာနိုင်ခြင်းမရှိ၊ မျက်စိဖြင့်ငြီးငွေ့စရာကောင်းသည်၊ ၎င်းတွင် gnome shell ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမျက်နှာစာရှိသော်လည်းသူတောင်းစားတစ် ဦး ဖြစ်နေသည်မှာမှန်ပါသည်။
Gen X ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ဒါကဝုန်းဒိုင်းကြဲသလိုဖြစ်နေတယ်၊ ​​ခင်ဗျားအတွက်အရမ်းခက်ခဲတယ်၊
Gen X ကိုပြန်ပြောပါ
ဟေ့၊ ဘယ်အချိန် Ubuntu 12.04 ထွက်လာတာလဲ။ !!?! ? သို့မဟုတ်၎င်းသည်အိမ်တစ်လုံးကဲ့သို့ကြီးမားသောစာလုံးပေါင်းကြီးလား။
Pablo Sanchez အားပြန်ပြောပါ
ဒါဟာပါပလောအမှားမဟုတ်ပါဘူး။ Ubuntu 12.04 ကိုနောက်ဆုံးဗားရှင်းမဟုတ်ပါကခဏတာရရှိနိုင်ပါတယ်။
Ubuntu 12.04 ၏ alpha, beta သို့မဟုတ်နေ့စဉ် builds များကိုအသုံးပြုသူများသည်ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Unity5ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ပွေ့ဖက်! ရှင်ပေါလု။
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုငါချစ်တယ်၊ မင်းဒီလိုပဲဆက်လုပ်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်၊ ငါလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘလော့ဂါတစ်ယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင့်အဆင့်မှာမရောက်သေးဘူး၊ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်တွေကိုစွန့်ခွာဖို့စိတ်မ ၀ င်စားဘူး၊ ကျွန်တော့်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဖျော်ဖြေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါ့အတွက် Mint ဟာ Ubuntu ထက်ပိုဆိုးတယ်
ချစ်လှစွာသော DEBIAN ထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာမရှိ
နောက်ဆုံးမှာတော့ Dash ကိုပိုပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တာကိုမြင်နေရပြီ။ ဒါက Compiz Fusion အပိုင်း Unity သာလျှင်ရယ်စရာပါ။